I-Racecourse, Ikamelo Elinombhede Olala Abantu Ababili, Indlu Yokugezela & Indawo Yokupaka - I-Airbnb
I-Racecourse, Ikamelo Elinombhede Olala Abantu Ababili, Indlu Yokugezela & Indawo Yokupaka
West Berkshire, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ellie & Daniel
Ikamelo Elinombhede Olala Abantu Ababili Esitezi Esiphansi elinegumbi lokugezela langasese (elesivakashi kuphela).
Ikhaya elisha sha eliphakathi kwe-Racecourse & ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya esiteshini sesitimela sase-Newbury Racecourse. Ikhaya eligcinwe kahle eline-broadband esheshayo kakhulu.
Ilungele Ukuqeqeshwa kwe-Ambulensi, i-Hambridge Road Business Park, i-Vodafone Global HQ, i-Newbury College, i-hot & Calleva Park-ctrl kuwo wonke amapaki e-Newbury/Thatcham Business ukuze uhambe kalula.
Indawo enhle eluhlaza ezungeze i-racecourse yokuhamba.
- Ikamelo elilala abantu ababili elinombhede, izingubo zokugqoka, isibani nedeski elinesihlalo sasehhovisi esintofontofo. Ilungele ukusebenza kude.
- Isivakashi sakho Indlu yokugezela eneshawa enamandla, indlu yangasese, isitoreji nosinki. Akusetshenziswa omunye umuntu.
- Akufanele isetshenziswe izivakashi.
- Kuningi ukupaka emgwaqweni okutholakalayo eduze kwendlu. Kukhona indawo yokupaka yezivakashi ngaphandle kwengaphambili lendlu eduze kwendawo yethu kodwa ayikwazi ukuqinisekisa ukuthi izotholakala...kuhlale kufanelekile ukubona ukuthi kumahhala yini kuqala.
- Ihlanzekile futhi inakekelwe kahle ingadi ebheke eningizimu enezihlalo netafula.
- Imizuzu engu-12 yokuhamba ngezinyawo ukuya esiteshini sase-Newbury Racecourse
- imizuzu engu-25 yokuhamba ngezinyawo ukuya Esiteshini/Idolobha
lase-Newbury - 5 imiz ukuhamba ngezinyawo ukuya e-Nuffield Heath Gym
Sinamakati amabili aziphatha kahle asendlini.
Indawo enhle enokuthula enokubukwa kwe-Racecourse. Eduze kwawo wonke amapaki ebhizinisi lendawo kuhlanganise ne-Vodafone Global HQ, i-Calleva Park, i-Hambridge Lane. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya edolobheni lase-Newbury elinenqwaba yezitolo zekhofi, izindawo zokudlela nama-bar.
Kukhona i-Nuffield Gym eyakhiwe ngamatshe enganikeza ukudlula kwesikhathi esifushane/usuku.
Ibungazwe ngu-Ellie & Daniel
We enjoy spending time with family & friends and our cats.
Mina nomyeni wami sihlala lapha, futhi sinekamelo elengeziwe esikujabulele ukulinikeza izivakashi.
Hlola ezinye izinketho ezise- West Berkshire namaphethelo